Indonezia: Fakàna An-keriny Ankizy Hakàna Vola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2017 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Tsy dia mino ny antony mahatonga ireo olon-dratsy maka an-keriny ankizy mba hahatrarana ny tanjon'izy ireo ny olona ao Indonezia. Ny zavatra azo antoka dia mitombo ity toe-javatra ity ary mitombo haingana mampanahy. Ny “farany malaza indrindra” tamin'ny toe-javatra fakàna an-keriny ankizy toy izany dia ny famotsorana an'i Raisya, 4 taona omaly tolakandro rehefa nalaina an-keriny nandritra ny 9 andro tao Jakarta.
Maro ireo sekoly nanamafy ny fepetra fiarovana mba hisorohana ny fiverenan'ny tranga toy izany. Izany hoe: mihevitra ny sekoly sasany fa tsy ampy ny fiarovana napetrany. Hoy ny tatitry ny Cheetezz:
Araka ny filazan'ny the Jakarta Post, nangataka vola teo amin'ny IDR 150 tapitrisa hatramin'ny 700 tapitrisa ireo naka an-keriny an'i Raisya ho takalon'ny famotsorana azy. Mahavariana, fa ny atidoha nikotrika ny fakàna an-keriny dia ny vadin'ny mpampianatra Koranika an'i Raisya ihany, izay midika fa ny olona ahiana dia olona fantatr'ity ankizy nalaina an-keriny ity tsara mihitsy.